तपाँइ पुरुष हो भने यि ४ कुरा सधै गोप्य राख्नुस : चाणक्य - ।। Naya Kuro ।।
२३ जेष्ठ २०७६, बिहीबार २१:५६ June 6, 2019 Naya KuroLeaveaComment on तपाँइ पुरुष हो भने यि ४ कुरा सधै गोप्य राख्नुस : चाणक्य
आचार्य चाणक्य केवल राजनीतिका मात्र नभई जीवन दर्शनका पनि ज्ञाता थिए । उनले जीवनमा जे–जति अनुभव सँगाले र जुन नियम बनाए, त्यो लोकलाई दिएर उनी अमर भए । उनी महान् शिक्षक, गुरु पनि थिए । उनका केही कुरा जो सयौं वर्षपहिले जति सान्दर्भिक थिए, अहिले पनि त्यत्ति नै सान्दर्भिक छन् । उनले जीवनका हरेक पक्षमा दिएका सन्देशहरू आज पनि उत्तिकै उपयोगी छन् ।
पुरुषले गोप्य राख्नुपर्ने चार कुरा :
१. आचार्य चाणक्यले यदि कुनै पुरुषको मनमा दुःख छ भने त्यो कसैसँग अभिव्यक्त गर्न नहुने बताएका छन् । किनभने संसारमा सच्चा हितैषी एकदमै कम हुने गर्छन् । जुन मानिससँग दुःख अभिव्यक्त गरिन्छ उसैले पिठ्युँपछाडि यसको मजाक उडाउन सक्छ । जसका कारण यसले झन दुःखी बनाउँछ ।
२. चाणक्यले धनको क्षति भयो भने पनि यसबारे कसैलाई भन्न नहुने सुझाएका छन् । धनको क्षतिबारे अरूलाई बताउँदा यसले प्रतिष्ठा नष्ट हुन्छ । मानिसहरूले उसको सम्मान गर्न छाड्छन् । मानिसले धन क्षति भएको थाहा पाएमा सम्मानको साटो उपहासको विषय बनाउन थाल्छन् ।
३. पुरुषले आफ्नो घरको भित्री कुरा पनि बाहिर कसैलाई बताउन नहुने चाणक्यले भनेका छन् । विशेषगरी आफ्नी पत्नीको चरित्रका विषयमा अर्कोसँग कुनै पनि टिप्पणी गर्नु हुँदैन । यसो गर्नाले पुरुषको प्रतिष्ठा र सम्मानको नाश हुन्छ । भविष्यमा उसले विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
४. जसले मान–सम्मानलाई समान रूपमा लिन सक्छ त्यो ज्ञानी पुरुष हो । यस्तो गर्न सक्नु एकदमै कठिन मानिन्छ । चाणक्यले भनेका छन्– जीवनमा मिलेको अपमानलाई कहिल्यै पनि अरूका सामुन्ने चर्चाको विषय बनाउनु हुँदैन । हुन सक्छ, तपाईं अरूलाई भनेर मनको भावना पोख्न चाहनुहुन्छ तर सुन्ने मानिसले यो कुरा दोस्रो मानिसलाई बतायो भने अपमान झन बढ्न सक्छ । यसकारण अपमानसँग जोडिएका घटना कहिल्यै कसैसँग बताउनु हुँदैन ।
लकडाउनमा थप कडाई : बाहिर हिँड्दै हुनुहुन्छ ? पर्नुहोला प्रहरीको फन्दामा
१४ चैत्र २०७६, शुक्रबार १६:५२ March 27, 2020 Naya Kuro
१३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १७:१६ May 26, 2020 Naya Kuro